सर्वस्वीकार्य बन्न नसकेको विभूषण - Khabar Break
काठमाडौं । ‘देश र जनताका लागि उल्लेखनीय कार्य गरेको’ भन्दै यो वर्ष संविधान दिवसको अवसरमा सरकारले ९ सय ३ जनालाई विभिन्न पदक दिने घोषणा ग-यो । यो संख्या गत वर्षभन्दा ३ सय ५९ ले बढी हो । गत वर्ष ५ सय ९४ जनालाई विभूषण दिइँदा सुरुका विभिन्न पाँच तहका मानपदवी कसैलाई पनि दिइएको थिएन ।
ओली, नेम्वाङदेखि नागरिक अभियन्तासम्म असन्तुष्ट, कतिले गरे फिर्ता
यो वर्ष २५ किसिमका विभूषण घोषणा गरिएकोमा ११ किसिमका मानपदवी, आठ किसिमका अलंकार र ६ किसिमका पदक छन् । हरेक साल दिँदै आएको विभूषणको योपटक पनि चर्काे विरोध भएको छ । कारण हो, पदक पाउने कतिपयकोे पृष्ठभूमि र कार्यशैली केलाउने हो भने आधार र औचित्य खुल्दैन । विगतझैं यो वर्ष पनि सरकार, सरकारी व्यक्ति र सत्तारूढ दलको प्रशंसा गर्नेलाई नै पदक बाँडिएको छ ।
एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वसभामुख एवं एमाले स्थायी समिति सदस्य सुवासचन्द्र नेम्वाङदेखि सामाजिक सञ्जालमा आबद्ध अनेक तह तप्कामा व्यक्तिले सरकार र विभूषण पाएका केही व्यक्तिका नाममा चर्काे विरोध गरेका छन् । जथाभावी विभूषण वितरण गरिँदा विभूषणको वास्तविक हकदारमाथि भने अन्याय हुने गरेको छ ।
पूर्वमुख्यसचिव लिलामणि पौडेल वर्षमा पाँच÷सात जनालाई मात्र विभूषण दिँदा राम्रो हुने सुझाव दिन्छन् । ‘राज्यले दिने विभूषण भनेको त लाइफटाइम अचिभमेन्ट अवार्डजस्तो हो । देशका लागि उत्कृष्ट काम गर्नेलाई मात्र दिनुपर्छ, अहिलेको विभूषण राजतन्त्रको बेलामा दरबारले वितरण गर्ने तक्माभन्दा फरक केही भएन । यसमा आमूल सुधार आवश्यकता छ,’ उनको भनाइ छ ।
नयाँ पत्रिका दैनिकका प्रधान सम्पादकसमेत रहेका देवकोटाले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत विभूषण अस्वीकारको घोषणा गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘ढिलो उठ्ने मान्छे, ढिलै थाहा पाएँ । नेपाल सरकारले मलाई सुप्रबल जनसेवाश्री पदक प्रदान गर्ने निर्णय गरेकोमा सरकारलाई धन्यवाद † तर पदकहरूको वितरण विवेकपूर्ण र पारदर्शी नभएको भन्दै निरन्तर प्रश्न उठाइरहेको सञ्चारकर्मीका नाताले आफंै पदक स्वीकार गर्नु नैतिक हुने देखिनँ । नेपाली पत्रकारितामा थोरै पनि हस्तक्षेप गर्न सकेको भए मलाई सामाजिक प्रेरणा नै पर्याप्त छ ।
घोषणा गरिएका व्यक्तिलाई नेपाली नयाँ वर्षको अवसर पारेर १ वैशाख २०७९ मा राष्ट्रपतिले तक्मा प्रदान गर्नेछिन् । तीन वर्षअघिसम्म हरेक वर्ष गणतन्त्र दिवसका दिन १५ जेठमा तक्मा वितरण गरिँदै आएको थियो ।
सुरक्षा निकायमा विभूषणको अर्थ
सुरक्षा निकायमा भने विभूषणले ठूलो अर्थ राख्छ । योपटक नेपाल प्रहरीमा प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षत्रीसहित विभिन्न तहका १ सय १९ जनालाई पदक दिने घोषणा गरिएको छ । सशस्त्र प्रहरीमा पनि नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) राजु अर्यालसहित झन्डै ४२ जनालाई पदक दिइएको छ ।
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा विभूषण र पदकको बढी अर्थ रहनुको कारण हो, पहिलो–इज्जत र दोस्रो–बढुवाका लागि थप दुई नम्बर प्राप्त हुनु । पदकबाट प्राप्त यो दुई नम्बरले बढुवामा ठूलो अर्थ राख्छ । यही दुई नम्बरले रोलक्रममा धेरै तल रहेका व्यक्तिलाई पनि बढुवा हुन सघाउँछ ।
तर, पदकबाट प्राप्त हुने नम्बर एकपटकका लागि मात्र जोडिन्छ । अर्काे बढुवाका लागि फेरि अर्काे पदक पाउनुपर्छ ।
सुरक्षाकर्मीको बढुवामा विभूषणको नम्बर जोडिने भएकाले यसले ठूलो विकृति ल्याएको कतिपय अधिकृत अनौपचारिक कुराकानीमा बताउने गर्छन् । त्यसैले बढुवामा विभूषणको नम्बर राख्नै नहुने विषयमा पनि लबिङ भइरहेको छ । स्रोतका अनुसार यो विषयमा नियमावली संशोधनको प्रक्रियासमेत अघि बढिसकेको छ । पूर्वमुख्यसचिव पौडेलयस्ता विकृति हटाउन सुरक्षाकर्मीका लागि छुट्टै किसिमको पदक दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँछन् ।
यो वर्ष आईजीपी शैलेश थापा क्षत्रीलाई सुकीर्तिमय राष्ट्रदीप प्रदान गर्ने घोषणा गरिएको छ । यस्तै, डीआईजीहरू घनश्याम अर्याल, धिरजप्रताप सिंह, उत्तमराज सुवेदी, प्रकाशजंग कार्की, वसन्तकुमार पन्त, प्राविधिक डीआईजी डा. मीनराज पाठक र डा. रामकृष्ण राजभण्डारीलाई सुप्रबल जनसेवाश्री प्रदान गरिने भएको छ ।
यस्तै, सशस्त्र प्रहरी बलका तर्फबाट नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) राजु अर्यालले सबैभन्दा ठूलो पदक पाएका छन् । उनले पाएको पदक सातौं नम्बरको सुकीर्तिमय राष्ट्रदीप हो । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) शैलेश थापा क्षत्रीलाई पनि यही पदक दिइएको छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका अन्य कुनै पनि वरिष्ठ अधिकारीलाई यो पदक दिइएको छैन ।
त्यस्तै, सशस्त्रका अर्का डीआईजी नारायणदत्त पौडेलले पाएको सुप्रबल जनसेवाश्री आठौं नम्बरको हो । सशस्त्रका तर्फबाट यही पदक नेपाल एपीएफ अस्पतालका निर्देशक प्राविधिक सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) डा. रुपक महर्जनलाई दिइएको छ ।
सशस्त्र प्रहरीमा नवौं नम्बरको कीर्तिमय राष्ट्रदीप पाउने एक मात्र भाग्यमानी व्यक्ति एसपी दीपेन्द्र कुँवर (ख) हुन् । उनी सशस्त्र प्रहरीमा सिसं २ का ब्याचका हुन् ।
त्यस्तै, १०औं नम्बरको प्रबल जवसेवाश्री पाउने एसपीहरूमा विष्णुदत्त भट्ट, शंकर खनाल, हर्कराज पन्त, नीरकृष्ण अघिकारी र कमल तिउसिना रहेका छन् । यही पदक पाउनेमा प्राविधिक सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षकहरू डा. मनोरञ्जन द्वा, डा. रेश्मु थापा र डा. सौजन्य कर्माचार्य छन् ।
यस्तै, सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) रमेशविक्रम शाही, दिनेश शर्मा, धिरेन्द्रराज न्यौपाने, शेरबहादुर अधिकारी, सूर्यप्रसाद तिमिल्सिना र प्राविधिक सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक लक्ष्मी अधिकारीले पनि प्रबल जनसेवाश्री पदक पाएका छन् ।
यस्तै, सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकहरू रामहरि श्रेष्ठ, सन्तोषकुमार चन्द, नारायण गुरुङ र रामकुमार लामिछानेलाई पनि प्रबल जनसेवाश्री पदक दिइएको छ ।
पहिला १२ करोड, अहिले २५ करोड खर्च
विगतका वर्षभन्दा यस वर्ष तक्मा वितरणमा राज्यकोषबाट झन्डै दोब्बर खर्च लाने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । गृह स्रोतका अनुसार यसपटक विभिन्न मानपदवी, अलंकार र पदकका लागि राज्यकोषको २० देखि २५ करोड रुपैयाँ खर्च हुने भएको छ । यसअघि भने तक्मा वितरणमा बढीमा १० देखि १२ करोड रुपैयाँसम्म खर्च हुने गरेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
विगतमा ३ सय देखि ५ सयसम्मलाई तक्मा वितरण गर्ने गरिएकोमा यो वर्ष ९ सय ३ जनालाई वितरण गरिएको छ । तक्मा वितरणको चाँजोपाजो मिलाउने जिम्मेवारीमा रहेको गृह मन्त्रालयको आन्तरिक व्यवस्थापन शाखाका अनुसार तक्मा पाउनेहरूको संख्या दोब्बरले बढेकाले तक्मा बनाउन यसपटक हालसम्मकै सबैभन्दा बढी खर्च हुने भएको हो । सबैभन्दा ठूलो पदकका रूपमा रहेको नेपाल रत्न बनाउन मात्रै झन्डै २५ लाख खर्च हुन्छ । हिरा र सुुन जडित सो तक्मा अत्यधिक मूल्यवान् रहेको छ । यसैगरी, यसपटक १० देखि १५ लाख रुपैयाँसम्म पर्ने तक्मा धेरै जनाले पाएकाले पनि राज्यकोषबाट बढी रकम खर्च हुने स्थिति आएको हो ।
यस्तो हुन्छ ३० लाख मूल्यको नेपाल रत्न
यो तक्मा हिरा, सुन र मिना जडित हुन्छ । यो आठ कोणको मणिबाट बनेको हुन्छ । यसको ब्यास ८.५ सेन्टिमिटर हुन्छ । यसको अग्रभागको प्रत्येक कोणमा पाँच÷पाँचवटा हिरा रहेको हुन्छ । कोणहरूको बीचमा दुई पातासहितको आठवटा लालीगुराँस रहेको हुन्छ । आठवटा कोणको बीचमा सुनको रश्मि आकारको आठवटा कोण हुन्छन् । सुनको रश्मि आकारभित्र कमलको पात आकारको आठवटा रातो मिना हुन्छ । यसको मध्यभाग सुनबाट बनेको नेपालको नक्सा र त्यसमाथि सुनकै सगरमाथाको चित्र हुनेछ ।
अन्य तक्माहरू राष्ट्रगौरव, राष्ट्रदीप, सुप्रबल जनसेवाश्री पनि सुन, हिरा, मुगाजडित १० लाख रुपैयाँसम्मका हुनेछन् ।
विभूषण ऐन २०६४ अनुसार राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पु¥याउने व्यक्तिलाई मुुलुकका तर्फबाट कदर तथा सम्मानस्वरूप मानपदवी, अलंकार, तथा पदकजस्ता विभूषण (तक्मा) प्रदान गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, तक्मा वितरण गर्दा कानुनमा रहेको सो प्रावधान पूर्णरूपमा बेवास्ता गर्ने गरिएको छ । गृह मन्त्रालयले तक्मा वितरणका लागि बनाएको कार्यविधिको समेत पालना भएको छैन । सो कार्यविधिअनुसार तक्मा पाउनेहरूको सिफारिस गर्दा उसले राष्ट्रका लागि गरेको योगदानको बारेमा समेत समीक्षा हुनुपर्ने उल्लेख छ । तर, हरेक वर्ष तक्मा वितरण गर्दा गृह मन्त्रालय र राजनीतिक नेतृत्वबाट सो कार्यविधिको ठाडै उल्लंघन हुने गरेको छ ।
कार्यविधिअनुसार गरिएको सिफारिसको आधारमा भन्दा पनि उच्चपदस्थ राजनीतिक व्यक्तित्व, मन्त्री तथा सचिवहरूको पकेटबाटै तक्मा पाउनेहरूको नाम राखिएको दाबी गृह स्रोतको छ ।
स्रोतका अनुसार गृह मन्त्रालयबाट नियमअनुसार जाने सिफारिसमा दर्जनौं व्यक्तिको नाम गैरकानुनी रूपमा थपिने गरिएको छ । गृह मन्त्रालयबाट तक्मा पाउनेहरूको सिफारिस प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पुगेपछि प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा अन्य अनधिकृत व्यक्तिहरूले समेत नाम थपेर नियमविपरीत तक्मा दिने गरेको गृह मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।